Ixabiso elifanelekileyo lokusebenzisa ukuhamba kwabakhenkethi eSpain | Ezezimali
Embindini wexesha lasehlotyeni, iSpain iba yindawo ekuyiwa kuyo ngabantu abangenakubalwa abakhetha iindawo kunye nezixeko zabo ukwenza iiholide zabo kuhambo olukhoyo lwabakhenkethi, ngokwecandelo eliphumayo nakwamanye amazwe. Ukuya kwinqanaba lokuba lilizwe lesibini okanye lesithathu elinabantu abatyelelweyo, emva kweUnited States kunye nokugcina umlo neFrance. Ewe, unyaka nonyaka abatyali zimali abancinci nabaphakathi bahendwa ngamaxabiso ecandelo lezokhenketho ukwenza ulondolozo lwabo lube nenzuzo ngendlela efanelekileyo.
Impazamo kuphela kulo nyaka kukuba abanye babameli beli candelo lemarike yemasheya ababonisi umba wobugcisa obavumela ukuba bavule izikhundla kukhuseleko lwabo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba liye lonakala kancinci ngenxa ye- ukwaphuka kwenkxaso ebalulekileyo ababenazo ngexesha lotyelelo lwabo ngokuhambelana namaxabiso abo. Ewe kunjalo, le ayisiyiyo imeko ekhuthaza ukuba nethemba, kodwa kukhetho olungqongqo, amathuba okuthenga okwenyani anokufumaneka ukusukela ngoku.
Ngaphandle kokubaluleka kokhenketho eSpain, iinkampani zeli candelo zidweliswe kwimarike yesizwe eqhubekayo ayibalulekanga ngokubhekisele kwinani labo. Ngokubanzi imelwe ngamaxabiso ecandelo lokuhlala ehotele. Kodwa ukukhula kwabo kuye kwabakhokelela ekubeni babhekise iimfuno zabo zorhwebo kwezinye iindawo okanye kwimimandla yejografi yamanye amazwe. Umzekelo, amazwe ajolise ukhenketho loshishino kwilizwekazi elidala. Into ngokungathandabuzekiyo inokuligqwetha ixabiso eziinkampani zithengisa ngalo mzuzu.
1 Ukuhamba kwabakhenkethi: iinqwelomoya
2 IAG kwi-radar yabahlalutyi
3 I-Amadeus yenye yezona zinto ziphambili
4 Inkangeleko embi yehotele
5 Ukufika kwabakhenkethi eSpain kuyakhula
6 Iindawo ekuyiwa kuzo ngokuyintloko
7 Iindlela zokungena kunye nendawo yokuhlala
Ukuhamba kwabakhenkethi: iinqwelomoya
Kwicandelo lezokhenketho, enye yeendawo zeshishini ezinokunika uvuyo olukhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi yilezo zeenqwelo moya. Ayothusi into yokuba yindlela yothutho eya isanda esetyenziswa kakhulu ngabahambi, ukonakalisa imoto, uloliwe okanye ezinye iimodeli zezithuthi zikawonkewonke. Kodwa ngemeko ekhethekileyo kakhulu kunye nokuxhomekeka kwayo kwixabiso leoyile kwaye oko kungakhokelela kurhwebo kwelinye icala okanye kwelinye. Ngeli xesha, ukuvela kweenqwelomoya kuxhomekeke kwindaleko yeasethi ebalulekileyo yezemali nangaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo.
Ukuba ulindelo lwenxalenye elungileyo yabahlalutyi bezezimali kwinxalenye yesibini yonyaka luzalisekisiwe, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba ixabiso le-crude liza kuwa. Kude kube Ubume beedola ezingama-50 okanye ezingama-60 ngomgqomo. Kule meko yokuhlangana, omnye wabaxhamli abakhulu iya kuba ziinkampani zeenqwelo moya eziza kubona ukuba amaxabiso abo aphucuka kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, elinye lamaxabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku kuya kuba yi-IAG ngokuchanekileyo. Inokuba sesinye sezimanga ezincumisayo kwinxalenye yokugqibela yonyaka, ukuba nje oku kulindelweyo kuyafezekiswa.
IAG kwi-radar yabahlalutyi
Le moya ingene kwipotfoliyo yotyalo-mali yenxalenye elungileyo yabahlalutyi kwiimarike ze-equity. Balatha phi kwinto enokudweliswa? kufutshane kakhulu kumanqanaba ee-8 okanye i-9 ze-euro ngesabelo ngasinye. Nangona ngokuchaseneyo, lukhuseleko olunqabileyo olunika umohluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi kwiseshoni nganye yorhwebo. Ukuba kunjalo, ukhetho oluphezulu lomngcipheko kubatyali mali olunephrofayili ekhuselekileyo okanye ekhuselayo. Ayilolize, kwaye ngaphandle kokuba inokunyuka kwintengiso yemasheya, lixabiso elithandabuzekayo kwaye elinamathandabuzo amaninzi kuhlalutyo lobuchwephesha.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ayinakulityalwa ukuba i-IAG yenye yeenkampani ezinokuchaphazeleka kakhulu Brexit. Ngale ndlela, akukho khetho ngaphandle kokukhathalela iqhinga lakho lotyalo-mali xa ujongene nento enokwenzeka e-United Kingdom. Ngaphandle kwento yokuba sisiphakamiso esinexabiso elibaluleke kakhulu lokuhlaziya kwaye ngaphezulu kwexabiso labanye abameli besalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Okwangoku, amaxabiso abo ahamba ngaphakathi kuluhlu phakathi kwe-5 kunye ne-7 ye-euro ngesabelo ngasinye, kunye nokuhla okuninzi kumaxabiso abo emihla ngemihla.
I-Amadeus yenye yezona zinto ziphambili
Ngokuchasene noko, le nkampani yeetekhnoloji yenye yezo zigcina imeko ezingcono kwiziphumo zayo kwaye ngenxa yoko, zinomdla omkhulu kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, itekhnoloji entsha ivumela iinqwelo moya ukuba zisebenzise izisombululo zobuchwepheshe obuphezululogy ukuphuhlisa iindlela ezinenzuzo ngakumbi, ezinokuthenjwa, ezikhawulezayo nezilula zokuphucula iindlela, ukuvula ixabiso ngakumbi kwishishini lakho. ILATAM Airlines Group kutshanje ityikitye isivumelwano seminyaka emininzi sokuphumeza izinto ezimbini zeAmadeus Sky Suite nguOptym: iSkyMAX kunye neSkySYM.
Ezi ziindaba ezintsha ezinokunyusa amaxabiso enkampani yetekhnoloji kwaye enokunika uvuyo olungaphezulu kwesinye kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngayiphi na imeko, ukuba kukho into ekumemayo ukuba uthathe izikhundla kweli xabiso, yinyani leyo imeko yayo elungileyo yezobuchwephesha, ngakumbi kwixesha eliphakathi nelide. Zingasetyenziselwa ukubandakanya eli xabiso kuphononongo olulandelayo lweepotifoliyo yethu yotyalo-mali. Ngaphandle kwenyani yokuba isahlulo esabiwe phakathi kwabanini zabelo asikho sesona siphezulu, ngenzuzo esondele kwi-2,50% ngentlawulo yonyaka kunye nokuqinisekiswa ngonyaka.
Inkangeleko embi yehotele
Ngelixa ngokuchaseneyo, okufanayo akwenzeki ngexabiso lecandelo lehotele. Kwindlela eya ezantsi ecacileyo kwaye inokuthatha amaxabiso abo asezantsi kwamanqanaba akhoyo kwikoteyishini yabo. Ukungabikho kuyo nayiphi na imeko lelinye lamaxabiso acetyiswayo ngabalamli bezezimali, abakhetha ukuthengisa ngaphezulu kunokuthenga. Ngaphandle kwedatha elungileyo yokuhamba kwabakhenkethi kule minyaka idlulileyo. Kodwa oko ngandlela-thile, banako yiya kuqoqosho okanye ekumeni kwikota zokugqibela zalo nyaka kwaye nefuthe lawo kuya kufuneka liqinisekisiwe.
Ngokuchasene noko, kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba kwenzeka ntoni kwiziphumo zokuhlala kwezi hotele kwezi nyanga zehlobo. Kuba inokuba kunjalo ukuba yayikukuqala kwe- tsala isicatshulwa amaxabiso abo. Kodwa okwangoku, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulinda ezi ziphumo kwaye ngale ndlela imbonakalo ayinathemba kakhulu. Njengokwehla okunokwenzeka kuqoqosho lwamanye amazwe. Ukuze ngale ndlela, iziseko zisekwe kwinto enokuthi icatshulwe leli candelo kwiimarike zezabelo.
Ukufika kwabakhenkethi eSpain kuyakhula
ISpain ifumene abakhenkethi bamanye amazwe abazizigidi ezi-5,6 ngoMatshi, I-4,7% ngaphezulu kwenyanga enye yowama-2018, ngokweenkcukacha eziboniswe yi-Statistics of Movements Movements on Borders (FRONTUR) kwaye zipapashwe yi-National Institute of Statistics (INE). Apho kubonakala khona ukuba i-United Kingdom lelona lizwe lihlala kulo, elinabakhenkethi abangaphezulu kwe-1,1 yezigidi, ezimele i-19,7% yetotali kunye nokuhla kwe-6,2% xa kuthelekiswa noMatshi wonyaka ophelileyo.
Kufunyenwe kule ngxelo yaseburhulumenteni ukuba EJamani naseFransi Lawa mazwe alandelayo kunye nabakhenkethi abaninzi abatyelele iSpain. IJamani ifaka igalelo kuma-812.433 (i-1,3% ngaphantsi komyinge wonyaka) kunye neFrance 677.518 (4,6% ngaphezulu). Phakathi kwamanye amazwe okuhlala, kufanelekile ukuqaqambisa ukukhula kwabakhenkethi abavela eRashiya (27,2%), ePortugal (23,6%) naseMelika (18,4%).
Iindawo ekuyiwa kuzo ngokuyintloko
ICanary yi eyona ndawo iphambili kubakhenkethi ngo-Matshi, nge-23,7% yetotali iyonke. Zilandelwa yiCatalonia (22,6%) kunye neAndalusia (15,1%). Ngaphezulu kwesigidi esi-1,3 sabakhenkethi abafika kwiiCanary Islands, i-0,5% ingaphantsi kuno-Matshi wonyaka ophelileyo. Amazwe aphambili okuhlala abakhenkethi abasuka kolu luntu yi-United Kingdom (ene-31,6% yetotali) kunye neJamani (20,0%). Inani labakhenkethi abatyelele iCatalonia lenyuke nge-4,9% kwaye lalisondele kwisigidi esi-1,3. I-20,9% ivela eFrance kunye ne-16,1% kwihlabathi liphela.
Indawo yesithathu ephambili ekuya kuyo ngenani labakhenkethi yiAndalusia, kunye nabakhenkethi abangama-850.475 kunye nokunyuka konyaka kwe-8,0%. I-United Kingdom lelona lizwe liphambili lemvelaphi (ngama-27,4% ewonke), ilandelwa yiJamani (10,8%). Kwezinye iindawo eziZimeleyo, inani labakhenkethi lenyuke nge-21,9% eComunidad de Madrid kunye ne-2,4% eComunidad de Valencia. Ngokuchasene noko, yehle nge-8,8% kwi-Illes Balears.
Iindlela zokungena kunye nendawo yokuhlala
Indlela yesikhululo seenqwelomoya yeyona isebenza njengendawo yokungena kwelona lizwe likhulu labakhenkethi ngo-Matshi, nangaphezulu kwe-4,7 yezigidi, emele ukunyuka kwe-4,7% ngonyaka. I-1,7% ngaphezulu yabakhenkethi bafika ngendlela, i-1,9% ngaphezulu ngololiwe kunye ne-40,9% ngaphezulu kwizibuko. Kufunyenwe kule ngxelo yaseburhulumenteni ukuba EJamani naseFransi Lawa mazwe alandelayo kunye nabakhenkethi abaninzi abatyelele iSpain. IJamani ifaka igalelo kuma-812.433 (i-1,3% ngaphantsi komyinge wonyaka) kunye neFrance 677.518 (4,6% ngaphezulu). Phakathi kwamanye amazwe okuhlala, kufanelekile ukuqaqambisa ukukhula kwabakhenkethi abavela eRashiya (27,2%), ePortugal (23,6%) naseMelika (18,4%).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ixabiso elifanelekileyo lokusebenzisa ukuhamba kwabakhenkethi eSpain